थाइराइड रोगीले कस्ता खानेकुरा खानुहुँदैन
काठमाडौँ । थाइराइड एक प्रकारको हर्मोन हो । हाम्रो थाइराइड ग्रन्थीले शरिरबाट आयोडिन लिएर यसलाई बनाउँछ । यो हार्मोन हाम्रो मेटाबोलिजमलाई कायम राखिराख्नका लागि आवश्यक हुन्छ । जब यो ग्रन्थीले कुनै कारणवश धेरै हर्मोन बनाउन थाल्छ, त्यतिबेला थाइराइड बढ्ने गर्दछ । विस्तृतमा
महिनावारीको समयमा महिलाले आफ्नो हेरचाह कसरी गर्ने ?
सास गन्हाउने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
यस्ता छन् सहजै तौल घटाउन तरिका
मोटाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
– तौल घटाउन व्यायाम गर्नुपर्छ । बिहान सबेरै हिँड्ने बाँनी बसाल्नुपर्छ । व्यायाम सकेपछि नियमित नुहाउनुपर्छ । यसले शरीरलाई स्वाच्छ र फुर्तिलो बनाउँछ । योगासन र प्राणायमबाट पनि तौल घटाउन सकिन्छ ।
शरिर 'फिट एण्ड फाइन' राख्न यस्ता खानेकुराहरु खानुहोस्
महसँग यी खानेकुराहरु खाँदा के हुन्छ ?
काठमाडौँ । नियमित महको सेवनले हाम्रो स्वास्थमा धेरै फाइदा पुर्याउछ । मानव स्वास्थको लागि बहुउपयोगी मानिन्छ । मह सही तरिकाले खाइएन भने यसले स्वास्थमा नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ ।
घरपरिवारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने चारवटा कुराहरु
एजेन्सी । पतिपत्नीको बिचमा माया प्रेम सधैं प्रगाढ हुनपर्छ । यसको लागि शास्त्रमा बताइएको केही खास कुराहरु ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
मंगलबारको दिन रक्सी र मासु नखानुहोस्
एजेन्सी । हरेक बारका आफ्ना आफ्नै विशेषता रहेका छन् । हिन्दु धर्मअनुसार मंगलबारका दिन केही यस्ता कार्यहरु गर्नुहुँदैन । यस्ता कामहरु गरेमा हानी हुनसक्ने बताइएको छ ।
रक्सीसँग के के खानेकुराहरु खानुहुँदैन ?
रक्सी खानुभयो ? थाहा पाउनुहोस् रक्सी पिएपछि के खाने ?
एजेन्सी । रक्सी डिहाइड्रेसन गराउने कारण भएकाले रक्सी पिउनुभन्दा कम्तीमा एक घन्टाअघि र रक्सी पिएको एक घन्टापछि फलफूलको रस, प्रशस्त पानी पिउनु बेस हुन्छ ।
कब्जियतबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ ?
काठमाडौं । कब्जियतले धेरै मानिसहरुलाई प्रभावित बनाएको हुन्छ । थुप्रै मानिसहरु यस समस्याबाट पीडित हुने गर्छन । सामान्यतया कब्जियत हाम्रो खानपान र जीवनशैलीको कारणले यसले थप जटिल असर पुर्याउँछ । यसले पेटमा गम्भीर गडबडी भएको संकेत गर्छ भने सबै उमेरका मानिसमा यो समस्या देखिन्छ भने विशेषगरी वृद्धवृद्धा यसबाट बढि पीडित हुने गर्छन् । यस समस्यालाई समाधान गर्न यी विशेष उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
८ कक्षामा फेल भएपछि घरको आक्रोश खेपे, त्यसपछि...
एजेन्सी । कम्प्युटरमा गहिरो रुची थियो, यही कारण पढाइका दौरान परीक्षामा फेल पनि भए । घरपरिवारले उनीसँग निराशा ब्यक्त गरे ।
अनुहार फरक भएजस्तै उसको भाग्य, जीवन र कर्म पनि...
संसारका सारा जीवहरुको एउटै साझा खोज–सुख ! त्यहि दुई शब्दको खोजले कतिलाई कष्ट दियो । कतिलाई महाविपत्ती र कति परे इहलीलामा ।
एजेन्सी । महिनावारी महिलाहरुको शरीरमा हुने नियमित जैविक प्रक्रिया हो । परम्परागत हिन्दु धार्मिक मान्यताले यस महिनावारीको समयलाई अछूतका रुपमा व्यवहार गरेको पाइन्छ । महिनावारी एक प्रक्रिया रहेसँगै यस समयमा महिलाले आफ्नो शरीरको विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि महिलाले विभिन्न उपायहरु अपनाउन सक्छन् ।